काका र फुचुङ्गी (भाग ९) - NepaliEkta
काका र फुचुङ्गी (भाग ९)
889 जनाले पढ्नु भयो ।
फुचुंग्री : काका ! अस्तिको अमरीकी आर्मी चार्टर विमानको अन्तिम उडानसँगै बिस वर्षको अफगानिस्तानमा अमेरिकी आधिपत्य समाप्त भएछ हैं ?
काका : हो नानी, बिस वर्षको खुनी संघर्ष पछि अमेरिकी साम्राज्यबादले घुंडा टेकेको हो, अहिले अफगानिस्तान अमेरिकी साम्राज्यवादी पञ्जाबाट मुक्त भएको छ ।
फुचुंग्री : अमेरिकासँग त धन, पैंसा, हतियार, गोला, बारूद, फौज ठूलो छ भन्छन् त कसरी हारेछ फेरि ?
काका : तँ पनि कति लाटी हो । देशभक्ति त्याग र बलिदानी समर्पणको अगाडि धन, बल, घमण्ड आफै चकनाचुर हुन्छ । हाम्रो देशमा पनि अंग्रेजस“ग नालापानी लड्दा गोला, बारूद, फौज ठूलो मात्रामा थियो । नेपाली बहादुरको देशभक्ति त्याग र बलिदानी समर्पणको भावना र नांगो खुकुरी त थियो । बलिदानी र देशभक्ति भावनाको अगाडि किराएमा आएका फौज र तिनले चलाउने हतियार निकम्मा हुन्छन् ।
फुचुंग्री : होइन काका, नेपालमा ती वीरका सन्तान हामी किन आपसमा मिलेर देश बनाउने बाटो बनाउन सकेनौं ?
काका : हो प्रजातन्त्र आए पछि नेपाली सत्ताधारी दल र नेताबाट कमजोरी भएकै हो । भ्रष्टाचार उन्मूलन र देशको सीमा क्षेत्रमा तारबार, युवा रोजगारी पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्दथ्यो । नेपाली नेताहरुले देश र जनताको हितमा काम गर्न सकेनन् ।
फुचुंग्री : ति प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका जेलनेल भोगेका पाका अनुभवी क्रान्तिकारी भनिने नेताहरुलाई थाहा नभएर होला र यति गम्भीर गल्ति गरेको ?
काका : यिनीहरूलाई सबै थाहा छ, साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा अझै पुँजीवादी प्रजातन्त्र पनि आएको छैन । विदेशी साम्राज्यवादी शक्ति र केन्द्रबाट अप्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप रहँदै आएको छ । आज पनि काठमाडौंको गद्दीमा को बस्ने ? दिल्लीमा निर्णय हुन्छ ।
फुचुंग्री : यस्तो गम्भीर अवस्थामा त देशभक्त क्रान्तिकारीहरु एक ढिक्का हुनु पर्ने होइन र ?
काका : हो नानि ! देश र जनताको हितमा पार्टी र क्रान्तिको लागि सचेत र संगठित देशभक्त क्रान्तिकारीहरु एक ढिक्का हुनै पर्छ । अवसरवादी, अतिवादी, अराजक तत्वहरूको विरूद्ध सम्झौताहीन संघर्ष गरेरै अगाडि बढ्न सकिन्छ । सही नीति र सिद्धान्तले देशको राजनैतिक भविष्य तय गर्दछ ।
फुचुंग्री : यसको अर्थ धनगढीमा अस्ति भएको सुदुर पश्चिम प्रदेशीय कथित राजमो बिद्रोही भेलालाई पार्टी केन्द्रले कामै नलाग्ने गरी खारेज गरेकै हो त ?
फुचुंग्री : उ ! के के सोध्छे यो फुचुंग्री पनि !
← महिला र तीज पर्व
इतिहाँसले सुम्पेको जिम्मेवारी पुरा गरौं, अवसरवादीहरुको भ्रमलाई परास्त गरौं । →